Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. दाङमा समय अगावै पुल निर्माण सम्पन्न, स्थानीय खुशी – Emountain TV
दाङ, २९ कात्तिक । विकास निर्माणमा सबैभन्दा ढिलासुस्ती हुने र भ्रष्टाचार हुने भनेको सडक तथा पुल निर्माणमा हो । ठेक्का भएको वर्षाैसम्म पनि पुल निर्माण भएन, पुल अलपत्र पर्यो भन्ने समाचार धेरै सुन्न पाइन्छ । समयमै पुल निर्माण भएको समाचार सुन्न नपाएको वर्षाैवर्ष भयो । तर, अहिले दाङको राप्ती नदीमा भने समयभन्दा अघिनै पुल निर्माण भएको सुखद समाचार आएको छ ।
दाङमा विभिन्न नदी तथा खोलाहरु मा पुल निर्माण कार्य जारी छन् । कतिपय बर्षौँदेखि बन्न सकेका छैनन् भने कति बन्ने क्रममा छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियाँ र महादेवा जोड्ने पुलको निर्माण कार्य समयभन्दा ८ महिना अघि नै सम्पन्न भएको छ । पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि बर्षाको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर र राप्ती नदी पारी पुग्न लामो बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता हटेकोमा स्थानीयहरु खुशी भएका छन् ।
बर्दियाको कोठियाघाटको पुलपछि राप्ती नदीमा बनेको यो दोश्रो लामो पुल हो । कोठियाघाटको पुल १ हजार १५ मिटर रहेको छ । यो पुल ८ सय ६० मिटर लामो र साढे १० मिटर चौडाई छ । आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा अनक निर्माण सेवालाई निर्माण गर्नको लागि टेन्डर परेको थियो । आव ०७६/७७ भित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । २०७३ चैत्र महिना बाट पुल निर्माणको काम थालनी गरीएको थियो । २०७७ असार मसान्त भित्र काम सक्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरीएको भएपनि समय भन्दा ८ महिना अघि नै काम सकिएको पुलका इन्जिनियर सुदिप बस्यालले बताउनुभयो ।
अहिले पुल निर्माण पूरा भएको र त्यहाँ पुग्ने सडक निर्माणको काम भईरहेको छ । उक्त पुलको आउदो माघ महिनासम्म उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ । यो पुल करिब एक अर्ब लगानीमा निर्माण पूरा भएको हो । निर्माण कम्पनीले गरेको ढिला सस्तीका कारण धेरै विकास निर्माण कार्यहरु अपुरै रहेको बेला समय अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस्ता तथ्य उदाहरण बन्न सक्छन् ।